Simia tsy simika | Ampitahao ny tsy fitovizan'ny teny mitovy amin'izany Simia tsy simika | Ampitahao ny tsy fitovizan'ny teny mitovy amin'izany
Trano / Archives ho an'ny siansa sy ny natiora / siansa / simia / simika tsy mikraoba
Inona ny fahasamihafana misy eo Perlite sy Zeolite
11 Aogositra 2021 Narotsak'i Madhu
Ny fahasamihafana lehibe misy eo amin'ny perlite sy zeolite dia ny perlite dia miseho amin'ny loko fotsy fa ny zeolite kosa dia miseho amin'ny loko mavo, manga, na maitso. Perlite dia fitambarana an-tsokosoko manana votoatin'ny rano avo lenta, ary izy io dia karazana fitaratra volkano tsy misy fotony. Zeolite, etsy ankilany, dia mineraly aluminosilicate microporous. LOHAHEVITRA 1. Topy maso […]
Inona ny fahasamihafana misy eo amin'ny Ferro Manganese sy Silico Manganese
10 aogositra 2021 Narotsak'i Madhu
Ny maha samy hafa ny manganese ferro sy ny manganes silico dia ny manganese ferro dia karazana alika manganese misy manganese sy vy miaraka amina karbôna vitsivitsy, fa ny silico manganese kosa dia misy silicon sy manganese miaraka amina karbôna vitsivitsy. Ny manganese Ferro sy ny manganis silico dia karazana alika manganese roa izay […]
Inona ny fahasamihafana misy eo amin'ny Amonia sy Boron Trifluoride
3 aogositra 2021 Narotsak'i Madhu
Ny maha samy hafa ny amoniaka sy ny boron trifluoride dia ny amoniaka dia molekiola polar, fa ny boron trifluoride kosa dia molekiola nonpolar. Amoniaka sy boron trifluoride dia manana atomika mitovy ary mifamatotra akaiky ny atôma, saingy misy mpivady elektronika mitokana amin'ny atômôma azôty amin'ny molekiola amônika raha mbola tsy misy elektrôna mitokana […]
Inona ny fahasamihafana misy eo amin'ny KH2PO4 sy K2HPO4
Ny fahasamihafana lehibe misy eo amin'ny KH2PO4 sy K2HPO4 dia ny KH2PO4 dia monobasic ary afaka mamoaka potasioma ambany raha ny K2HPO4 kosa dibasic ary afaka mamoaka potasioma be dia be rehefa ampiasaina amin'ny zezika. Ny teny monobasic sy dibasic dia manondro ny isan'ny potasiôna potasioma mifatotra amin'ny molekiola phosfat. Amin'ny hafa […]
Fahasamihafana eo amin'ny Sulfate Glucosamine sy ny Chucosamine Sulphate Potassium Chloride
14 Jolay 2021 Narotsak'i Madhu
Ny mahasamihafa indrindra ny glucosamine sulfate sy ny glucosamine sulfate potassium chloride dia ny hoe glucosamine sulfate dia singa iray voajanahary ao amin'ny vatan'olombelona, ​​fa ny glucosamine sulfate potassium chloride kosa dia zavatra simika. Samy glucosamine sulfate sy glucosamine sulfate potassium chloride dia avy amin'ny siramamy amine glucosamine. Votoatiny 1. Topimaso sy fahasamihafana lehibe 2. Inona no atao hoe glucosamine 3. Inona […]
Fahasamihafana eo amin'ny Chlorite sy Chloride
13 Jolay 2021 Narotsak'i Madhu
Ny fahasamihafana lehibe eo amin'ny klôro sy ny klôro dia ny klômanômôna ion dia mpiasan'ny oxidizing mafy, fa ny klôroida kosa dia tsy mpiasan'ny oxidizing. Ny klôro sy ny klôroôida dia tongolo nalaina avy amin'ny atôma klôro. Ireo anion ireo dia afaka mampitombo ny fitrandrahana azony mandritra ny fiasa simika, saingy ny ion-nôlamôida kosa no afaka mampihena ny fanjifana azy, ary ny klôroida kosa […]
Fahasamihafana eo amin'ny solifara alimina sy solifona amoniaka
Ny mahasamihafa indrindra ny sulfate aluminium sy ny ammonium sulfate dia ny sodium sulfate aluminium, fa ny ammonium sulfate kosa dia sira tsy miorina. Ny sulfate aluminium dia sira metaly manana ny raika simika Al2 (SO4) 3, raha ny amonium sulfat kosa dia fitambarana tsy mitambatra manana ny raika simika (NH4) 2SO4. LOHAHEVITRA 1. Topy maso sy fahasamihafana lehibe 2. Inona no atao hoe Aluminium […]
Fahasamihafana eo amin'ny iodine vao manomboka sy ny iode an'i Lugol
12 Jolay 2021 Narotsak'i Madhu
Ny fahasamihafana lehibe misy eo amin'ny iode ary ny iode an'i Lugol dia ny iode eo an-kibo dia mamela ny vatana hifoka iodine amin'ny fomba mahomby, fa kosa ny iode an'i Lugol dia mampiseho fahombiazana ambany amin'ny fitrohana iode satria ioda eo dia mifatotra amin'ny potasioma sira mineraly. Ny iode hivoahana sy ny iode an'i Lugol dia fanafody misy iode miaraka amin'ny singa iray. Iode ivoana dia […]
Fahasamihafana eo amin'ny asidra phosorika sy asidra sitrika
4 Jolay 2021 Narotsak'i Madhu
Ny fahasamihafana lehibe misy eo amin'ny asidra phosorika sy ny asidra citric dia ny asidra phosoratika dia asidra mineraly malemy, fa ny asidra citric kosa dia asidra organika malemy. Ny asidra phosorika sy ny asidra citrika dia asidra malemy. Noho izany, ireo asidra ireo dia tsy afaka misaraka tanteraka amin'ny ion; tsy afaka misaraka afa-tsy amin'ny ion izy ireo. LOHAHEVITRA 1. Topy maso sy fahasamihafana lehibe […]
Fahasamihafana eo amin'ny Lycra sy Neoprene
Fahasamihafana eo amin'ny Agent sy Manager
Fahasamihafana eo amin'ny Eurostar sy ny Rail Europe
Fahasamihafana eo amin'ny trano misy trano sy duplex
Fahasamihafana eo amin'ny fivezivezy ionic sy ny hafainganam-pandeha ionic